थ्री स्टार उदयपुर गोल्डकपको उपाधि नजिक (हाइलाइट्स), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
थ्री स्टार उदयपुर गोल्डकपको उपाधि नजिक (हाइलाइट्स)
गाईघाट । रूस्लान थ्री स्टार क्लब उदयपुर गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । उदयपुरको गाईघाटस्थित थरुहट रंगशालमा बुधबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा थ्री स्टारले झापा ११ लाई १–० ले पराजितगर्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो ।
थ्री स्टारलाई उपाधि नजिक पु¥याउन विदेशी खेलाडी अजयी मार्टिन्स नायक बने । मार्टिन्सले दोस्रो हाफमा गरेको एकमात्र गोल खेलका लागि निर्णायक बनेको हो । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुंगीएको थियो ।
दोस्रो हाफमा थ्री स्टारका अजयी मार्टिन्सले खेलको ५५ औं मिनेटमा रजिन धिमालले दिएको क्रस पासमा हेडरमार्फत आकर्षक गोल गरेका थिए । प्रतियोगिताको म्यान अफ दि म्याच थ्री स्टारकै विदेशी खेलाडी पिटर सेगुन घोषित भए । उनले ७ हजार नगत पुरस्कार प्राप्त गरे ।
अब थ्री स्टारले मनाङ मस्र्याङ्दी र सुनसरी ११ बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । मनाङ र सुनसरीबीचको दोस्रो सेमिफाइनल भोली बिहिबार अपरान्ह सुरुहुनेछ । उदयपुर गोल्डकपको पाँचौ संस्करणको विजेता टोलीले उपाधि सहित ५ लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ ।
प्रतियोगिताको हाइलाइट्स हेर्नुहोस् ।